Anaghị m eme ọtụtụ amụma mgbe ọ bịara n'ọdịnihu nke teknụzụ, mana mgbe m hụrụ ọhụụ teknụzụ, m na-ahụkarị ikike dị ịtụnanya maka ndị ahịa. Ntughari nke ọgụgụ isi jikọtara na akụ na-enweghị njedebe nke bandwidth, ike nhazi, ebe nchekwa na oghere ga-etinye nkata ihu n'ihu n'etiti ndị ahịa.
Chatbots abụghị ihe ọhụụ, ha anọgodi ma ọ bụrụhaala na nkata nọ gburugburu. Ihe gbanwere bụ ikike ha na mmadụ nwere ịkparịta ụka. N'ezie, teknụzụ dị elu nke ukwuu na enwere ohere ị nwereworị iso mkparịta ụka na mkparịta ụka na -adịghị achọpụta.
Enwere ụzọ abụọ ị ga - esi na - emekọrịta site na web. Mkparịta ụka na-agafe agafe na-ahapụ onye ọbịa ahụ ka ọ malite ịkpọtụrụ akara gị. Mkparịta ụka na-agba ọsọ na-ebute kọntaktị ahụ na onye ọbịa. Mgbe akara malitere ịkpọtụrụ onye ọbịa; iji maa atụ, jụọ onye ọbịa ma ha chọọ enyemaka, imirikiti ndị ọbịa ga-aza. Ọ bụrụ n’inwere ike itinye aka ma nyere onye ọbịa ahụ aka, ị nwere ike mezuo ọtụtụ ebumnuche:
Nduzi - Ọbịbịa abanyewo na peeji mana enweghị ike ịchọta akụ ha na-achọ. Mkparịta ụka gị na-ajụ ha, atụmanya ahụ zara, nkata chatbot na-ewetara ha peeji nke ngwaahịa, akwụkwọ akụkọ ọcha, post blọgụ, foto ma ọ bụ ọbụlagodi vidiyo nke nwere ike inye aka ịkwanye ha njem ha.
Cheedị echiche ịnwe otu ndị na - enweghị ekele ị ga - esoro ndị ọbịa gị wee nyere gị aka ịzụrụ… nke ahụ ọ gaghị abụ nrọ mezuru? Ọfọn, nke ahụ bụ ihe ọgụgụ isi na nkata ga-abụ maka ndị ahịa gị.